भारतीय दूतावासको पत्रको जवाफ परराष्ट्र मन्त्रालयले दिनुपर्छ : मन्त्री खनाल – KathmanduPati
भारतीय दूतावासको पत्रको जवाफ परराष्ट्र मन्त्रालयले दिनुपर्छ : मन्त्री खनाल
२०७६, २६ असार बिहीबार १६:२४
काठमाडौं – कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले भारतीय राजदूतावासले पठाएको पत्रको जवाफ परराष्ट्र मन्त्रालयले दिनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंको रिपोटर्स क्लबमा आयोजीत साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री खनालले भारतीय दूतावासले पठाएको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएको र त्यो दुई देशबीचको सम्बन्धको कुरा भएको बताउँदै उक्त पत्रको जवाफ परराष्ट्रले दिनुपर्ने बताए ।
उनले अहिलेपनि विषादी परीक्षण आफ्नै प्रक्रियामा भैरहेको सुनाए । उनले नेपालमा अहिले अस्तित्वमा रहेका विषादी परीक्षण ल्याबहरुको क्षमतामा प्रश्न रहेको सुनाउँदै ती ल्याबलाई छिट्टै स्तरोन्नती गर्ने विश्वास दिलाए ।
काठमाडौं उपत्यकाबाहिर अहिलेपनि ६–७ वटा ल्याबहरु रहेको भन्दै उनले ‘तर, ती सबै ल्याबहरु अहिले सञ्चालनमा छन’ भनेर भन्न नसक्ने बताए । भएका ल्याबहरु सञ्चालन गर्न म्यानपावरको समस्या भएको पनि उनले जनाए ।
उनले विषादी चेकजाँच गर्ने निर्णयबाट सरकार किन ब्याक भयो ? भनेर चौतर्फी कुरा उठेको सुनाउँदै निर्णयमा नाकामा चेकजाँच भन्ने शब्द राख्दा समस्या भएको सुनाए । उनले थपे, ‘अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रचलनअनुसार पनि नाकामा चेकजाँच हुँदैन । र, अहिले हामीसँग भएका ल्यावहरुलाई हामी छिट्टै अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरको बनाउँछौं ।’
अहिलेपनि अर्गानो फोस्फेट र कार्वोनोमेट दुई वटा विषादी परीक्षण हुने गरेको मन्त्री खनालले बताए । परीक्षण हुन नसक्नेलाई काठमाडौंमा ल्याउन सकिने उनको भनाई छ । उनले हरेक कुरामा विषादीमात्रै छ भनेर देख्ने तरिका पनि वैज्ञानिक नभएको गुनासो पोखे । ०७१ साल यताको रेकर्ड हेर्दा ग्रिन–जोनभन्दा तल धेरै कम मात्रामा रहेको उनले डाटा सुनाए ।
भारतबाट मात्रै नभएर भुटानबाट आयात हुने आलुलगायतका वस्तु र चीनबाट आयत हुने स्याउ परीक्षण हुने गरेको मन्त्री खनालले जनाए । सर्वोच्च अदालतले विषादी परीक्षण नरोक्न दिएको आदेश आफूहरुले पालना गर्नेपनि उनले विश्वास दिलाए । उनले भने, ‘अहिले हामीसँग भएका सबै ल्याव र साधन र स्रोत परिचालन गरेर हामी परीक्षणको काम गर्छौं ।’
सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न : कांग्रेस दिनभरि बिपी, रातभरि विप्लव हो ?
भारतीय पत्रबारे बोले प्रधानमन्त्री, मलाई तीन मन्त्रीले ‘गुमराह’मा राखे